Ungayifumana njani kwakhona iphasiwedi ye-Gmail ukuba awukwazi ukungena ngeposi | Iindaba zeGajethi
IiVillamandos | | Tutorials
inbox Yeyona nkonzo ye-imeyile isetyenziswa kakhulu kwihlabathi kwaye kuya kusothusa ukufumana umntu ongenayo iakhawunti yakhe kwinkonzo kaGoogle, ekwasinika ukufikelela kwezinye iinkonzo ezininzi zesikhangeli esikhulu. Iingxaki ezininzi zokhuselo ze-Yahoo okanye ukungasebenzi kakuhle kwezinye iinkonzo zolu hlobo kuye kwavumela ukuba ibe ngukumkani wokwenene. Ewe kunjalo, ukusebenza kwayo okungaphezulu kokulungileyo kunye nenani elikhulu lemisebenzi kunye nokukhetha okusinika ukuba sisingathe i-imeyile yethu kuye kwanefuthe elikhulu.
Ukwenza usuku lwakho lube lula kancinci namhlanje siza kukubonisa indlela yokufumana kwakhona iphasiwedi ye-Gmail, ngendlela elula nengacacanga, kwaye siza kuchaza nendlela yokutshintsha iphasiwedi ukuba eyakho iphelelwe lixesha okanye ukusilela kukhuseleko kunokuba kubonakale. Akukho zimbini iinkqubo ezinzima kakhulu, kodwa kufuneka ulandele imiyalelo ngokungqongqo, kuba kungenjalo unokuhlala ngokusisigxina ngaphandle kokufikelela kwiakhawunti yakho ye-imeyile.
1 Ungayitshintsha njani iphasiwedi yakho ye-Gmail
2 Ungayifumana kanjani kwakhona iphasiwedi ye-Gmail
Okokuqala makhe siye ngaphaya Ungayitshintsha njani iphasiwedi ye-Gmail, enokusetyenziswa nangaliphi na ixesha ukuyivuselela, ngezizathu zokhuseleko okanye ngaso nasiphi na esinye isizathu esingavela ngemini yakho. Ingcebiso yethu kukuba utshintshe ipassword amaxesha ngamaxesha, kwaye ngalo lonke ixesha ufumana i-imeyile engaqhelekanga okanye uqhagamshelo kwisixhobo esingaziwayo kuwe, into eza kuxelwa nguGoogle ngalo lonke ixesha isenzeka.
Ukufikelela kwi "I-akhawunti yam"
Ngoku ngaphakathi kwicandelo "Ukungena nokhuseleko" Kuya kufuneka ukhethe ukhetho «Ngena kuGoogle». Ukongeza ekukwazini ukutshintsha igama eligqithisiweyo, unokujonga ukuba ugqibele nini ukwenza utshintsho lwegama eligqithisiweyo kunye nokuba wenze amanyathelo amabini okuqinisekisa kweinjini yokukhangela enkulu
Khetha iphasiwedi. Ukwenza naluphi na utshintsho lwegama eligqithisiweyo kufuneka uqale ufake ipassword osele unayo, ke ukuba awuyikhumbuli ipassword yakho le ndlela ayizukunceda ukuphuma kule ngxaki ukuyo, kodwa ungakhathazeki kuba ungafumana ngaphandle kwaleyo ukuba uqhubeka ufunda
Okokugqibela, ngenisa igama lokugqithisa elitsha kwaye ucofe ku "Tshintsha iphasiwedi".
Ungayifumana kanjani kwakhona iphasiwedi ye-Gmail
Ukuba sikhumbula kuphela idilesi ye-imeyile, kodwa hayi iphasiwedi, awunakukhathazeka kwaye iGoogle ikhe yacinga malunga noku. Kwaye kukuba ngendlela elula esinokuyifumana kwakhona okanye sisete kwakhona ipassword yethu ye-Gmail ukuba nje siyahlangabezana neemfuno ezithile kwaye silandele amanyathelo esikubonisa apha ngezantsi;
Okokuqala kufuneka singenise i-imeyile, esingayikhumbuliyo ngegama eligqithisiweyo
Ngoku inkonzo izakusicela ukuba singene Iphasiwedi yokugqibela siyayikhumbula. Ayinamsebenzi into oyibekayo kuba ithiyori asiyikhumbuli. Ukuba ngethuba singena ngegama eligqithisiweyo le-imeyile, uGoogle uya kusixelela
Ukuba ngemini esabhalisa ngayo, okanye sayifaka kamva, ngenombolo yefowuni, uGoogle uya kusithumela ikhowudi kwisixhobo sethu esiphathwayo ekufuneka siyingenisile ukuze sisete iphasiwedi kwakhona. Ewe kunjalo, kubalulekile ukuba siqale siqinisekise inombolo yefowuni ebhalisiweyo
Ukuba ukwazile ukuqinisekisa inombolo yakho yefowuni kwaye ungenise ngempumelelo ikhowudi ethunyelweyo, ngoku unokutshintsha iphasiwedi yeakhawunti yakho ye-imeyile, kwiscreen osibonayo kumfanekiso esikubonisa apha ngezantsi
Ngoku ukuba unegama lokugqitha elitsha, osanda kungena ngalo, ungaqala ukulisebenzisa ngokwesiqhelo. Ewe, ukuba unolunye uhlobo lwegama eligqithisiweyo eligcinwe kuso nasiphi na isixhobo okanye kwenye ikhompyuter, kuya kufuneka uyitshintshe ukuze entsha iqale ukusebenza ngaphandle kwengxaki.
Ngaba ukwazile ukutshintsha okanye ukubuyisa iphasiwedi yakho kwiakhawunti ye-imeyile ye-imeyile?. Sitshele kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule post okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona. Sitshele kwakhona ukuba unemibuzo, kwaye ngokusemandleni ethu siya kuzama ukukunika isandla kwaye sincede ukusombulula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Fumana kwakhona iphasiwedi ye-Gmail
URobert Gretter sitsho
ndilibele inombolo yokuvula
Phendula URoberto Gretter